Semalt Islamabad Expert dia mamelabelatra amin'ny Metasearch na mpikaroka mpikaroka
Ny milina fikarohana dia milalao anjara mavitrika amin'ny fananana fanentanana maharitra ho an'ny fanentanana . Amin'ny laharam-pahamehana, ny algorithome amin'ny alàlan'ny fikarohana dia mandinika antony sasany. Ny motera fikarohana an-tsokosoko dia miasa amin'ny famokarana rindrambaiko mandady ny tranonkalanao toy ny bots and spiders.
Michael Brown, manam-pahaizana ambony indrindra avy amin'ny Semalt Digital Services, dia milaza ireo olana saro-pady momba izany.
Inona ny milina fikarohana?
Rehefa mikaroka ao amin'ny pejin'ny tranonkala ireo milisy fikarohana, dia mandefa sy mitahiry ny fampahalalana ao amin'ny tahiry. Rehefa mikitika mankany an-tranonkala an-tapitrisany, manamboatra sy manangana tahirin-tserasera ny fitaovam-pikarohana, mametraka ny tenimiafina mivadika amin'ny teny manan-danja amin'ny fehezanteny tsy misy dikany. Ny webmasters dia niasa tamin'ny fametahana anarana ho laharana amin'ny algorithm.
Ny sasany amin'ireo webmasters sy ireo mpivarotra an-tserasera sasany dia mampiasa teknolojia mainty SEO mba ahafahana miditra ireo teny fanalahidiny miovaova amin'ny algorithm. Google sy Bing dia tsy te ho voafitaka. Ny fandefasana rakotra sy duplicate ny votoatin'ny pejy web anao dia tetikady fohy izay afaka manova ny andian-teny avo be ao anatin'ny fotoana fohy. Na dia izany aza dia manana fomba hitantanana sy famaizana ireo webmasters Google izay mandika ny politikan'ny SEO sy ny fitsipika SEO.
Fikarohana milina fikarohana
Maro amin'ireo mpamboly an-tserasera, mpanolo-tsaina momba ny varotra, ary tompona tranokala no mahazatra azy ireo amin'ny mpamily mikaroka. Ity karazan'ny fitaovam-pikarohana ity dia mandefa sy manindry ny angon-drakitrao avy hatrany rehefa avy nandady ny tranokalanao.
Fomba fitadiavana maotera dia tetikasa maharitra sy tetik'asa mahomby izay manatsara ny tranokalanao sy ny fivarotana amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny fampiasana vokatra tsy aloa. Mandrehitra ny sainan'ny mpitsidika ary manatsara ny fifaranan'ny mpampiasa anao.
Manampy azy ireo hamerina bebe kokoa ny fampiroboroboana ny tsenanareo amin'ny tsipika mahaliana..Amin'ny farany, ianao dia mamaritra ny laharana avoakany ary mametaka ireo pejy miaraka amin'ny teny fanalahidinao miovaova. Ireto misy santionany amin'ny motera fikarohana amin'ny crawler:
Nisy fifandonana tsara nivezivezy teny amin'ny tsenam-barotra momba an'i Mojeek ho mpamorona orinasa na Metasearch. Mojeek dia vondron'ny fikarohana miorina any Royaume-Uni izay mikaroka vohikala hanasokajy azy ireo.
Fampahalalana ilaina amin'ny Metasearch Engines
7) Ny Metasearch Engines dia miankina tanteraka amin'ny mpitsikilo mba handinihana sy handaminana ny tahirin-keviny. Amin'ny ankamaroan'ny tranga, ny Metasearch Engines dia mametraka ny vokatra avy amin'ny fitaovam-pitadiavana ambony mpitsikilika voalohany miaraka amin'ny tanjona voalohany amin'ny famoahana ireo tahiry mahomby. Inona no fikarohana? Fanontaniana iray izay tokony handraisan'ny webmaster rehetra alohan'ny hanombohana fanentanana ety anaty aterineto.
Ireo metasearch Metasearch dia mifantoka ny endrik'ireo mpampiasa farany mba hampisehoana ny valiny notadiavin'ireo mpampiasa. Ohatra azo ampiasaina amin'ny Metasearch Engines dia tsy marefo ary mivoatra.
Meta vs. mpitrandraka
Ny fampiasana fitaovam-pitadiavana amin'ny mpikaroka dia mampiasa ireo singa fototra mba handaminana ny valiny. Etsy ankilany, ny Metasearch Engines dia miankina amin'ny mpitsikilo hanamboatra sy handamina ny antontan-kevitra. Raha tsy misy motera hitsanganana sy handamina ny valiny, ny Metasearch Engines dia azo alaina mora foana amin'ny alàlan'ny fitaovam-pikarohana vaovao eny an-tsena.
Ny ideolojia fifaninanana
Ao amin'ny sehatry ny marketing (digitale) dizitaly , Google dia mampiasa ny mpivarotra sy ny mpampiasa. Google dia manome tolotra maimaim-poana sy feno ho an'ireo mpitsidika. Ny fahatakarana ny fahasamihafana eo amin'ny Metasearch Engines sy ny môtera mpikirakira mpikaroka dia tena manan-danja indrindra.
Ho an'ny mpivarotra izay manome lanja ny fahaizan'ny mpampiasa, Metasearch Engines no safidy tsara indrindra. Ity karazana milina fikarohana ity dia manolotra ny valin'ny fanontanianao izay mora azon'ny mpizara. Ao amin'ny sehatry ny varotra maoderina amin'izao fotoana izao, mbola zava-dehibe ny traikefan'ny mpampiasa. Mifidy ny milina fikarohana tsara indrindra izay mifanentana amin'ny fanentanana an-tserasera ianao mba hitifitra ny tsenan'ny lozam-pifamoivoizana ary hanatsara ny fahitana ny orinasa amin'ny fotoana tena izy Source .